Udliwanondlebe kaMegyn Kelly ka-Alex Jones: I-JPMorgan Chase itsale iiNtengiso - Ezintsha
Eyona Ezintsha I-JPMorgan Chase itsalela iiNtengiso ze-NBC ngaphezulu kuka-Megyn Kelly ka-Alex Jones Udliwanondlebe
UMegyn Kelly uphantsi komlilo.UJim Watson / AFP / imifanekiso kaFetty
Enye yezona ndlela zinamandla iinkampani ezinokubonisa ukuba azivumelani nezenzo zenkqubo kukutsala inkxaso mali. UDelta, iBhanki yaseMelika kunye neAmerican Express benze kanye le mpelaveki ukuqhankqalaza iTrump-efana noluntu UJulius UKesare , kwaye ngoku uJPMorgan Chase uthatha indawo yokulwa nodliwanondlebe noMegyn Kelly.
Isiqendu esilandelayo Ubusuku bangeCawa noMegyn Kelly , owayesakuba ngumsasazi omtsha we-NBC show entsha ye-NBC, uzakubonisa udliwanondlebe nomphathi woonomathotholo kunye no-theorist weqhinga u-Alex Jones. Kwiwebhusayithi yakhe i-InfoWars kunye nomdlalo wakhe werediyo, uJones uthe i-Oklahoma City bombing kunye ne-9/11 zahlaselwa. imisebenzi yangaphakathi .
Eyona nto iphikisana kakhulu, yena ibango Ukudutyulwa kweSandy Hook Elementary School ngo-2012 (apho kwabulawa abantwana abangama-20 nootitshala abathandathu) kwakuyinkohliso eyathi yenziwa ngabadlali ababefuna ukuqhubela phambili ne-ajenda yabo yolawulo lwemipu.
Ngenxa yoku, iintsapho zabantu ababulewe eSandy Hook zicace gca noKelly ngokunika uJones iqonga. Bebekade bembiza nge-Twitter:
Nako sisiya @kwiiyshana - igama lakhe nguAna Grace Márquez-Greene. Yitsho igama lakhe- jonga kule kwaye undixelele ukuba kufanelekile. @nbc #SandyHook pic.twitter.com/mKrU63KWmA
-Nelba Márquez-Greene (@Nelba_MG) Isilimela 12, 2017
Esi siqwenga senkunkuma sikhuthaza abantu ukuba bakubize ukusweleka kukamama njengesiqhinga kwaye bahlukumeze ezinye iintsapho zeSandy Hook. Inyala kuwe @kwiiyshana . https://t.co/uGmhqQAEeR
-Cristina hassinger (@ chass63) Isilimela 12, 2017
Oku yokudlala ngoSuku kaTata. Khawufane ucinge ukuba ulahlekelwe ngumntwana wakho kudutyulo ngelixa indoda eyikhanyelayo eyenzekileyo ifumana udliwanondlebe. #ShameOnNBC
-UDanielle Vabner (@daniellelvabner) Isilimela 12, 2017
Udliwanondlebe lubangele nokuba iqumrhu elinye likhanyele i-NBC esona sixhobo sibalulekileyo: intengiso yemali.
I-JPMorgan Chase kunye neNkampani igqibe ekubeni isuse i-TV kunye nentengiso yedijithali kuyo yonke inkqubo ye-NBC kude kube semva kodliwanondlebe noJones ngeCawa, Ijenali yeWall Street kuxelwe okokuqala phezolo.
Kwangoko ngemini, igosa eliphambili lezentengiso lenkampani uKristin Lemkau wayebize uKelly kuTwitter:
Njengomthengisi, ndiyakucaphukela oko @kwiiyshana inganika i-airtime yesibini umntu othi Sandy Hook kunye ne-Aurora zii-hoaxes. Ngoba? https://t.co/luwyCwP7Ti
-Kristin Lemkau (@KLemkau) Isilimela 12, 2017
Abekho abanye abathengisi abakhutshiweyo okwangoku, nangona iqela lokuthintela ubundlobongela eSandy Hook Promise kwaziswa UKelly akasayi kuphinda abambe iGala yeQela leSithembiso.
UShannon Watts, umseki wombutho wokukhuthaza Umama ufuna isenzo seGun Sense eMelika , Kwakhona wabhenela uKelly ku ilungisiwe Yokucokisa 29.
UAlex Jones ubekwindawo ebonakalayo ixesha elide kakhulu, wabhala uWatts. Lixesha lokuba ucime isibane, umyeke akhase umva phantsi kwesiqandisi.
UKelly ebezikhusela kwimithombo yeendaba kwiintsuku ezininzi:
I-POTUS ibikho & kudumisa @NtsikeleloTyala 'bonisa. Unika i-Infowars ubungqina beendaba ze-WH. Abaninzi abamazi; umsebenzi wethu 2 khanyisa isibane. https://t.co/5e88BJyqnz
-Megyn Kelly (@megynkelly) Isilimela 12, 2017
Okumangalisayo kukuba, omnye wabagxeki bakaKelly ongoyena uphikisayo nguJones ngokwakhe. Kwinkqubo yakhe kanomathotholo NgoMvulo, wathi udliwanondlebe lwalukhohlisiwe kwaye zindaba ezingeyonyani, kwaye watyhola uKelly ngokumlahlekisa. Uye wabiza i-NBC ukuba ingasasazi udliwanondlebe, kwaye wayichaza indwendwe njengobandayo kunye neerobhothi.
Ndaziva ndinomtsalane kuMegyn Kelly, utshilo.
I-Starliner ye-Boeing iyacothiswa ngakumbi ngenxa ye-ISS 'Traffic Jam' eyenziwe ngu SpaceX
Sonke iSithuba soKhenketho ngeNdawo onokuBhukisha ngoku, ukuba usisityebi
indlu yamakhadi isizini 3 isiqendu 2
Ngokwenene simahla umva wefowuni ujonge phezulu
inombolo yokubuyela umva jonga phezulu
amanenekazi amahle e-wrestling documentary
kwenzeke ntoni kwi-jubilee kwi-bachelor eparadesi
Indawo efanelekileyo yokuthenga i-vape mods